Umbalite - isku dar ah buufin, almandine, iyo garee spessartine - video
Ka iibso qurxinta dabiiciga ah dukaankeena
Noocyo kala duwan oo isku dhafan oo ka kooban isku dhaf ah walxo, almandine, iyo garaafka spessartine, oo leh sheybaarka kiimikada MlkiyoAl₂ (SiO₄) ₃-Mn²⁺₃Al₂ (SiO₄) ₃, oo gaar ahaan laga helay buluuga biyaha ee Umba, -Pink u yeelo midab madow.
Waxaa loogu yeeray dooxada Umba ee gobolka Tanga ee Tansaaniya, meesha laga helay sahankeeda koowaad ee 1978: Umba + -lite
Garnets waa nuucyo kala duwan oo leh qaabka guud X3Y2 (Si O4) 3. Goobta X waxaa badanaa lagu hayaa qoraallo qaylo leh (Ca, Mg, Fe, Mn) 2 + iyo Y oo ku yaala xarumo xayeysiis ah (Al, Fe, Cr) 3 + qaab dhismeedka octahedral / tetrahedral leh [SiO4] 4 - qabsadey tetrahedra. Garnets ayaa badanaaba laga helaa caado-diimeed, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa caado-guntada trapezohedron. Waxay ku qulqulayaan nidaamka dhererka, iyagoo haysta saddex xabbo oo dhererkoodu siman yahay iyo midba midka kale. Garnets ma muujin kala qaybin, marka marka ay jajabaan walaaca fekerka, qaybo aan caadi ahayn oo la sameeyo ayaa la sameeyaa (conchoidal).
Garnet ayaa la sheegay inuu ka caawinayo daaweynta wareegga wareegga dhiigga iyo xoojinta wadnaha. Waxay keentaa lama huraan waxayna xoojisaa xusuusta. Quruxda ayaa la sheegay inay astaan ​​u tahay dhisme.
Garnet waa dhagaxii dhalashada ee Janaayo. Xaqiiqdii, garnets waxaa loo adeegsaday dahabka dhalashada ilaa ugu yaraan qarnigii 15aad. Dhaqan ahaan, qurxinta gaduudka ayaa maskaxda ku soo dhaca markay ka fekerayaan qurmuunkan, laakiin nasiib wanaag carruurtii Janaayo, waxaa jira noocyo kala duwan oo qurux badan oo laga dooran karo. Xasiloonida iyo dareenka raaxada leh ee casaanka iyo buluuga ah ee umbalite ayaa si fiican ugu kordhiya xulashadan sii kordheysa.